Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Bayern Munich v Besiktas ee Champions League – Walaal24 Newss
February 20, 2018	1	By walaal24
Tababaraha kooxda Bayern Munich Jupp Heynckes ayaa qirtay inuu heysto go’aano adag oo kooxdiisu ay u tahay kulanka lugta hore ee wareega 16ka Champions League ee ay la leeyihiin Besiktas caawa oo Talaadada ah.
Bayern ayaa heysata ciyaaryahan walba oo taam ah, waxaana uu diyaar u yahay kulanka Allianz Arena, iyadoo goolhaye Manuel Neuer uu ka maqan yahay kaliya inuu ka soo kabsaday lugta jabtay.
Kulanka oo soo galaya caawa saacada Geeska Africa:-
Heynckes, oo koobkaan qaaday shan jeer horyaalka 2013, ayaa yiri: “Anigu ma heysan koox A ama B – waxaa jira kaliya hal Bayern.
“Ciyaaryahan kastaa wuu ogyahay booskiisa oo uu is fahmaa, sidaasi darteed uma maleynayo inaan dhibaatooyin badan ka qabno wareega, waxaa jira faa’iidooyin badan oo badan, sababtoo ah qof walba wuxuu dareemaa muhiim wuxuuna joogayaa cusub.
“Ma sahlana, laakiin waxaan qabaa in ciyaartoyda ay ku faraxsan yihiin sida aan u maamulay ilaa iyo haatan.”
Heynckes ayaa sideed isbeddel ku bilaabay kulankan oo 2-1 ku badisay Wolfsburg sabtidii, waxaana uu go’aansaday inuu ka mid noqdo ciyaartoyda 18ka ciyaaryahan ee wajahay Besiktas.
Thiago Alcantara ayaa dib ugu soo laabtay Wolfsburg ka dib seddex bilood oo uu ku maqnaa dhaawac, halka garabka French Kingsley Coman uu soo kabsaday.
Thomas Mueller, Corentin Tolisso iyo James Rodriguez ayaa dhamaantood ku tartamaya booska weerarka Robert Lewandowski, halka Coman, Arjen Robben iyo Franck Ribery ay iyagana doonayaan inay garab istaagaan.
Besiktas ayaa ku jirta wareega isreebreebka Champions League markii ugu horeysay. Kooxda heysata horyaalka Turkiga ayaa ku bilaabaneysa lix kulan seddex isbuuc ka hor inta aysan lugta labaad ee wareega 16ka ku wajahay Bayern, oo ay ku jirto labo kulan oo ay gurigooda kula ciyaarayaan Fenerbahce.
Waxa ay ka maqan yihiin Cenk Tosun, kaasoo ka tagay inuu ku biiro Everton ka dib markii uu dhaliyay afar gool wareegii group-yada, Alvaro Negredo ama saxiixa cusub ee Vagner Love waa inay ku soo bilowdaan. Besiktas ayaa kulankaan ku soo laabaneysa gadaal markii ay Jimcihii lasoo dhaafay ku kulmeen Konyaspor.
Dhanka kale, Bayern ayaa badisay 13 kulan oo isku xigta, inkastoo Heynckes uu rajeynayo inuu dagaal adag ku qabto Munich.
“Ma ahan wax lala yaabo in Besiktas ay halkaan joogaan, waxay ku guuleysteen seddexdii kulan ee ay marti ahaayeen wareega group-yada” ayuu yiri Heynckes. “Ma qarin doonaan, waxay jecel yihiin inay ciyaaraan kubada weerarka – haddii aad u ogolaato, taasina waa furaha, waxay raadinayaan fursadooda, markaa waxaan u baahanahay inaan u diyaargaroobo.”
Gudiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed oo markale dib u dhigay xiliga doorashada
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya oo maanta furaya kalafadhiga afaraad ee Golaha Shacabka